Uighur Archives - Ihe Ndị Ruuru Mmadụ & Ihe Osise site na PixelHELPER Foundation
27 nwere ike 2016
Mgbasa ozi maka ndi Alakụba nke Uighurs na China / ikike ndi mmadu
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 27. Mee 2016
PixelHELPER na-akwado nnwere onwe nke Uighurs, Hong Kong, Taiwan & Tibet
Icheta Uighur na Marrakech
Am 29.07.2019/1/XNUMX anyị na-ebipụta vidiyo nke XNUMXst nke ncheta Uighur na #Marrakech, anyị degaara akwụkwọ akụkọ Arab niile ihe anyị mere na enweghị azịza ọ bụla, naanị mgbe anyị gwasịrị ndị akwụkwọ akụkọ na ahịrị mbụ nke ihe ncheta a bụ maka ndị Juu nwere mmasị nwoke. ihe ncheta ahụ dị ka “ncheta Oké Mgbukpọ nke Marrakech” na akụkọ ihe mere eme nke Morocco. Atekpọasị meriri ịdị n'otu na Muslim Uighurs. Ruo taa, onweghi mba Alakụba dị n'ụwa na-akwado Uighurs ruo n'ókè ịchọrọ ya. N’ere anya na afọ 100 ncheta mbụ maka ndị Alakụba ndị Alakụba ga-abụ ntụgharị na ịdị n'otu nke mba ndị Alakụba na ndị Uighurs.
Anyị chọrọ ka anyị wughachi ụlọ ọ bụla bibiri China na mba ndị ọzọ ma hapụ ya ọkwa nke obodo na ebumnuche ịhapụ ikwe ka China bibie ọdịbendị Uighur.
Ọ bụrụ na ndị China kwaturu ụka 1000, iwe na Europe ga-abụ oke. Ọkụ na katidra nwere ike ịgbanye ịdị n'otu zuru ụwa ọnụ ebe a. Ebibila ụlọ alakụba 1000 na ụka Kraịst na China. Anyị enyela ndị Uyghurs niile ka ha wughachi ha dịka ezigbo akwụkwọ esenidụt iji mepụta ịdị n'otu maka ndị Alakụba na-emegbu emegbu n'ụwa niile. Ọ bụ ihe nwute na ọtụtụ Uyghurs na-ebi ọsọ ma ọ bụ n'ogige mmụta agụmakwụkwọ ndị China ma ụkọ. Ọ bụ ya mere anyị ji guzobe nkwado ego nke GoFundme. Dabere na ego ole anyị nakọtara, anyị na-ewulite ọba akwụkwọ, ụlọ alakụba ma ọ bụ ili.
China ebibiela ihe karịrị ụlọ alakụba 3, ebe ili ozu na arụsị arụsị n'ime afọ atọ. Beijing jiri usoro kpochapụ ọdịnala na okpukpe Alakụba ndị Alakụba. Ihe onyonyo di iche-iche gosiputara onyonyo di egwu. PixelHELPER ga-esetịpụ ihe atụ ma wughachi ili Iim Asim nke mbibi ahụ n’elu ugwu Moroccan na ihe ncheta ncheta nke ndị China mebiri. Ihe omuma ndi ozo banyere oru a
Anyị chọrọ ochichi onye kwuo uche ya na China. Na obodo ndị nwere Uyghur, Hong Kong, Taiwan & Tibet. A ga-agbaze Thetù Kọmunist ozugbo. Ìhè amụma ọkụ
Anyị na-achọ nnwere onwe okpukpe na China, na-asọpụrụ ihe ndị ruuru mmadu na nhoputa ndi ochichi maka ọdịnihu dị mma. A ghaghị wughachi ụlọ alakụba niile na efu nke China, ihe niile #Uiguren Ị ga - enwere ohere ịme okwukwe gị.
Mgbe ọ bụla European na-ama jijiji, Uighure na-akwagide ịta ahụhụ. Na China, a machibidoro Islam iwu, nrọ maka idiots nke aka nri. A kwatuola ụlọ alakụba 200, ndị China chọrọ ịma banyere mgbatị. Mkpọchi ndị Uighurs, ma chịa ọchị. Onye ọ bụla nke na-ekwere na Allah na China, na-eme ka ụmụaka na-apụ n'anya ụra.
Mgbe ahụ ndị Alakụba niile agaala, Xi Jinping kwuru na ọ mara mma nke ukwuu. N'ihi na elele steeti niile, mana enwere ike ịnwe ego China. Mana mgbe ahụ, ị ​​dị ka ọpụpụ, ugbu a, Uigure nọ na unyi. A Koran bụ tiketi maka ịta ahụhụ ahụhụ oge tiketi.
Saa ụbụrụ Uyghurs, Mohammed agaghị anabata nke ahụ. Bịaruo mgbidi China ma dinaa, chere. Ọ ga-eziga ndị na-agba ya na Họng Kọng, Tibet na gaba na. Ndị Alakụba niile ga-ezukọ n'azụ ma Xi Jinping ga-apụta otu. Na China enwere ochichi onye kwuo uche ya na nke ndi Alamophobia ozo.
Site na ulo oru ndi nkuzi na nlekota anya, ochichi gọọmenti China na-anwa igbochi nsogbu na mpaghara. Ndi gọọmentị kwadoro ịdị adị nke ụlọ ọrụ ahụ na October 2018, ma n'otu oge ahụ gọrọ ndị a ebubo na a na-agwọ ha n'ebe ahụ.
Maka ndị Uighurs, onye Muslim Turkvolki dị na mpaghara China nke Xinjiang, ọtụtụ agbanweela n'afọ ndị na-adịbeghị anya (foto sitere na 22.09.2013, mkpọmkpọ ebe ụlọ alakụba kwaturu na Kashgar). Mana ndị ndu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Beijing kwesiri ịghọta na ógbè kachasị ukwuu na West nke Ndị mmadụ Republic enweghị ikike.
Ndọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị China na Xinjiang yiri nke Buddhist Tibet: Chinese na agbụrụ na ụlọ ọrụ ha na-elebara anya. Ọ bụkwa ha na-erite uru karịsịa na mmemme akụrụngwa gọọmentị na itinye ego. N'ụlọ akwụkwọ, asụsụ Mandarin na-anabatakwa asụsụ obodo ahụ. Yabụ na Uighurs na-agbaga n'okpukpe iji jide njirimara ha. Ka gọọmentị na-adọkwu Islam aka, ọ na-agbakwasị ụkwụ na ya.
Anyị na-achọ ka a tọhapụ ndị niile Uighurs na mbido ozugbo
nke nnwere onwe okpukpe na China. Onye ọ bụla nwere ike ikwere ihe ọ chọrọ, Flying Spaghetti Monster ma ọ bụ otu n'ime okpukpe ndị dị n'ụwa. China ga-egbochi ndị bi na ya inwe nnwere onwe okpukpe. Na ukpuru German bu nnwere onwe okpukpe - nke kwesiri iburu iwu ndi China dika ihe atu.
Mgbasa ozi maka ndi Alakụba nke Uighurs na China / ikike ndi mmadu Mee 6th, 2020Oliver Bienkowski